"Endrey! manao ahoana ny fitiavana nasehon’ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak’Andriamanitra… Ry malala, ankehitriny aza dia zanak’Andriamanitra isika."1 Jaona 3:1, 2
Anarana re izany! Iza no afaka mihambo hitondra izany? Andriamanitra no manome io anarana io ho an’izay mandray an’i Jesosy ho Mpamonjiny, toy ny nanomezan’ny ray aman-dreniko ahy ny anarany, fony aho teraka.
Hoy ny Baiboly amintsika: “Izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay … naterak’Andriamanitra” (Jaona 1:12-13). Ireo izay mino dia naterak’Andriamanitra. Mandray ny ainy izy ireo, mandray ny fiainana mandrakizay, antsoin’Andriamanitra hoe zanany.
Tian’Andriamanitra mba hanana ny toetrany isika. Izy dia mazava (1 Jaona 1:5), ka mitaona antsika handeha “tahaka ny zanaky ny mazava” (Efesiana 5:8). Izy koa dia fitiavana (1 Jaona 4:8), ka ny Fanahy Masina no nentiny nampidina ny fitiavany ho ao am-pontsika (Romana 5:5), mba hiainantsika izany eo amin’izay olona rehetra ifandraisantsika, indrindra ireo rahalahy sy anabavy ao amin’ny ankohonan’Andriamanitra.
Misy koa tranom-pianakaviana iray, izay hitoeran’ny zanak’Andriamanitra rehetra indray andro any, dia ny tranon’ny Ray (Jaona 14:2).
Misy lova tsara voatokana ho ahy, toy ny ho an’ireo izay anisan’io ankohonana io koa, “voatahiry any an-danitra” (1 Petera 1:4), sady tsy mety hihen-danja no tsy mety ho levona.
Fa ny tena tsara indrindra amin’izany rehetra izany, dia ny fananako Ray tia ahy tsy misy fepetra sy miahy ahy mandrakariva. “Ny Ray dia tia anareo” (Jaona 16:27).
Anisan’io ankohonana io ve ianao?